ကမ္ဘာမှာ Covid-19 အောင်နိုင်သူ လက်တစ်ဆုပ်စာထဲက စကာင်္ပူက အသက် ( ၁၀၂ ) နှစ် ဖွားဖွား – Na Pann San
စင်ကာပူ မှာ အသက် 102 နှစ်ရှိ Yap Lay Hong ဟာ စင်ကာပူရဲ့ အသက်အကြီးဆုံး Covid-19 ကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်လာပါတယ်။ သူမဟာ Lee Ah Mooi ဘိုးဘွားရိပ်သာက အခြား 16 ယောက်နဲ့အတူ ရောဂါပိုးတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Lee Ah Mooi ကနေ အသက် 96 နှစ်တစ်ယောက်ပဲ ဆေးရုံမှာကျန်ပါတော့ တယ် ။
ကမ္ဘာမှာ ကိုဗစ်အောင်နိုင်သူ လက်တစ်ဆုပ်စာထဲက စကာင်္ပူက အသက် ( ၁၀၂ ) နှစ် ဖွားဖွား
Yap ဟာ ကမ္ဘာမှာ Covid-19 ကိုအောင်နိုင်သူ အသက်အကြီးဆုံး လက်တစ်ဆုပ်စာထဲမှာ ပါပါတယ် ။ သူမမှာ သားသမီး5ယောက်၊ မြေး 11 ယောက်နဲ့ မြစ် 13 ယောက်ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး Covid-19 ကိုအောင်နိုင်ခဲ့သူကတော့ နယ်သာလန်က Cornelia Ras ဆိုတဲ့ အသက် 107 နှစ် အဖွားအိုပါပဲ။
သူတို့အသက် 100 ကျော်တွေတောင်မှ Covid-19 ကို အောင်မြင်စွာအနိုင်ယူနိုင်သေးရင် Quarantine ဝင်နေရသူတွေ၊ positive ဖြစ်နေသူတွေ အနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အားပေးလိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် closed contact ဖြစ်ဖူးပြီး “ငါသာ Covid-19 ဖြစ်ခဲ့သော်”ကို တွေးဖူးသူမို့ ကျနော်ရေးပြီး အားပေးတာပါ။
သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ သားသမီးမြေးဘယ်လောက်များများ အနီးကပ်မနေရပဲ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ နေဝင်ချိန်ကို ဖြတ်ကျော်နေရတာကို သံဝေဂရပါ။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အရင်လုပ်ကြပါ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒါမျိုးကမကြာခင် ဖြစ်လာမှာပါ။ မိသားစုအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့…. အဲ့ဒီ အသက် ရာကျော်တွေကလည်း အဘွားအိုတွေပိုများနေခြင်းပါပဲ…
စငျကာပူမှာ အသကျ 102 နှဈရှိ Yap Lay Hong ဟာ စငျကာပူရဲ့ အသကျအကွီးဆုံး Covid-19 ကိုအောငျနိုငျသူဖွဈလာပါတယျ။ သူမဟာ Lee Ah Mooi ဘိုးဘှားရိပျသာက အခွား 16 ယောကျနဲ့အတူ ရောဂါပိုးတှခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ Lee Ah Mooi ကနေ အသကျ 96 နှဈတဈယောကျပဲ ဆေးရုံမှာကနျြပါတော့တယျ။
Yap ဟာ ကမ်ဘာမှာ Covid-19 ကိုအောငျနိုငျသူ အသကျအကွီးဆုံး လကျတဈဆုပျစာထဲမှာ ပါပါတယျ ။ သူမမှာ သားသမီး5ယောကျ၊ မွေး 11 ယောကျနဲ့ မွဈ 13 ယောကျရှိပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အသကျအကွီးဆုံး Covid-19 ကိုအောငျနိုငျခဲ့သူကတော့ နယျသာလနျက Cornelia Ras ဆိုတဲ့ အသကျ 107 နှဈ အဖှားအိုပါပဲ။
သူတို့အသကျ 100 ကြျောတှတေောငျမှ Covid-19 ကို အောငျမွငျစှာအနိုငျယူနိုငျသေးရငျ Quarantine ဝငျနရေသူတှေ၊ positive ဖွဈနသေူတှေ အနနေဲ့ စိတျဓာတျမကဖြို့ အားပေးလိုပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ closed contact ဖွဈဖူးပွီး “ငါသာ Covid-19 ဖွဈခဲ့သျော”ကို တှေးဖူးသူမို့ ကနြျောရေးပွီး အားပေးတာပါ။
သူတို့နိုငျငံတှမှော သားသမီးမွေးဘယျလောကျမြားမြား အနီးကပျမနရေပဲ ဘိုးဘှားရိပျသာမှာ နဝေငျခြိနျကို ဖွတျကြျောနရေတာကို သံဝဂေရပါ။ ကိုယျ့အတှကျကိုယျအရငျလုပျကွပါ။ မွနျမာပွညျမှာလညျး ဒါမြိုးကမကွာခငျ ဖွဈလာမှာပါ။ မိသားစုအခြိနျကိုတနျဖိုးထားကွပါ။
နောကျဆုံးပွောခငျြတာကတော့…. အဲ့ဒီ အသကျ ရာကြျောတှကေလညျး အဘှားအိုတှပေိုမြားနခွေငျးပါပဲ…
အိန္ဒိယ-မြန်မာ (၂) နှိုင်ငံ ပူပေါင်းမှုအား ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ရပ်များနှင့် မြန်မာပြည်တွင်းရေး ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်နေသော တရုတ် ရဲ့ လုပ်ရက်များ အိန္ဒိယ ဖွင့်ချ